Seychelles fizahan-tany ao amin'ny Edisiona Vaovaon'ny Espaina amin'ny Seho Fitetezam-paritany
Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Seychelles Madagascar Malgache » Seychelles fizahan-tany ao amin'ny Edisiona Vaovaon'ny Espaina amin'ny Seho Fitetezam-paritany
Vaovao Mafana • Vaovaom-panjakana • Hospitality Industry • Vaovao • Seychelles Madagascar Malgache • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News
Seychelles ao amin'ny Dive Travel Show
Nokarakarain'ny Diving Magazine LetsDiveMag, ny hetsika natokana ho an'ny fizahan-tany antsitrika sy jono izay mifantoka amin'ny volan-tantely, dia fotoana tsara indrindra Seychelles hamerenana ny tenany eo amin'ny tsenan'ny Espaniola ho toerana fizahan-tany voalohany antsitrika.
Ny solontenan'ny Tourism Seychelles ao Espaina Rtoa Monica Gonzalez dia nilaza fa nandritra ny roa andro dia nisy mpankafy ny fanatanjahan-tena an-dranomasina, anisan'izany ny antsitrika, ny jono ary ny fitetezana nitsidika ny trano heva Seychelles niaraka tamin'ny fanontaniana maro momba ny toerana haleha.
“Tena afa-po aho tamin’ny vokatry ny fandraisantsika anjara tamin’ny seho fitetezam-paritany Diving satria nanamarika ny fitomboan’ny fahalianana amin’ilay toerana haleha, izay tena mampanantena tokoa ho an’i Seychelles”, hoy Rtoa Gonzalez.
Nandritra ny Dive Travel Show 2021, Nisongadina i Seychelles anisan'ireo marika malaza eo amin'ny sehatry ny antsitrika mampiseho ny fitaovany sy ny fitaovany amin'ny hetsika.
Malaza amin'ny fahasamihafàny, ny Nosy Seychelles dia manolotra fanamby ho an'ireo tia fanatanjahan-tena eo am-panajana ny hatsaran-tarehy voajanahary ao amin'ny vondronosy. Voahodidin'ny rano mangatsiatsiaka kristaly, toerana fanaovana antsitrika mahavariana ary toerana fanaovana snorkelling, ireo nosy ireo dia voaporofo fa toerana tonga lafatra ho an'ny fanatanjahantena an-drano hafa manomboka amin'ny kayak ka hatramin'ny surf.